Ciidanka DANAB oo howlgal qorsheysan fuliyay | Allbalcad Online
Home WARARKA Ciidanka DANAB oo howlgal qorsheysan fuliyay
Ciidanka Kumaandooska DDANAB ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen degaanka Baqdaad oo kuyaal inta u dhaxeeysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad ee Gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose, halkaas oo saldhig weyn ay kulahaayeen Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in howlgalka ay weli siiwadaan kuna raadjoogaan Xubnaha katirsan Al-Shabaab ee isaga baxay degaanka Baqdaad.
Howlgalkan Ciidanka DANAB ay ka fuliyeen degaanka Baqdaad ayaa kusoo aadaya xilli Ciidamada Millateriga qeybta 27aad ay howlgallo ka fuliyeen degaano hoostaga degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Previous articleMaxay ka wada hadleen Farmaajo iyo Rooble?
Next articleMid kamid ah kuraasta Aqalka Sare oo goordhaw lagu doortay Kismaayo